ချစ်သူနဲ့ အတူလက်တွဲပြီး hiking လုပ်ခဲ့တဲ့ Taylor Swift
On March 12, 2018 March 12, 2018 By fairy
Blank space သီချင်းပိုင်ရှင် အားလုံးရဲ့ အသည်းကျော် Taytay တစ်ယောက်ကတော့ ချစ်သူအသစ်ကလေးနဲ့ ရွှေလက်တွဲပြီးတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေတာသာမက သူတို့နှစ်ယောက်တွဲရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါထွက်ရှိလာနေပါတယ်။
သတင်းအရဆိုရင်တော့ Malibu မှာ ချစ်သူ၂ယောက် အတူတူ hiking လုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး အပြန်လမ်းမှာ လက်ချင်းတွဲပြီး ပြန်လာနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ရတာ အေးအေးဆေးအေးနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိနေပုံရတယ်လို့လဲ တွေ့မြင်ခဲ့ရမျက်မြင်တစ်ယောက်ကပြောပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့သက်တောင့်သက်သာရှိနေပုံရတယ်ဆိုတော့ သူတို့ချင်း ကျွမ်းဝင်တာ အချိန်တော်တော်ကြာပြီလို့ ယူဆလို့ရတာပေါ့လေ…
Taytay လက်ရှိတွဲနေတဲ့ boyfriend အသစ်ကလေးကတော့ ဗြိတိန်သရုပ်ဆောင် Joe Alwyn ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ကတော့ သူတို့ရဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး သိုသိုသိပ်သိပ်ဖြစ်အောင် နေခဲ့ကြတာပါ။ သတင်းတွေအရဆိုရင်တော့ Taytay ဟာ Alwyn နဲ့ တွဲနေခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး လူကြားထဲမှာ ၂ယောက်သားအတူတွေ့ရတာမျိုးဟာ မရှိသလောက်နည်းပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ကိုပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ Jingle Ball ပွဲမှာပဲ နောက်ဆုံးအတူတွဲလျက်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပေမယ့် Taytay တစ်ယောက်ကတော့ Alwyn နေတဲ့ London ကို တိတ်တဆိတ် မကြာခနသွားရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Taytay ဟာ Alwyn တင်သာမကပဲ သူ့မိသားစုဝင်ညီအစ်ကိုတွေနဲ့လည်း ရင်းနှီးတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ အကြောင်းသိတစ်ယောက်က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Swifties တွေကတော့ Taytay တစ်ယောက် သူ့ချစ်သူကို May လမှာစလုပ်မယ့် သူ့ရဲ့ Reputation Tour မှာ တရားဝင်ကြေငြာတော့မှာလားလို့ ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။
တွဲခဲ့တဲ့ Ex တွေအကြောင်းသီချင်းရေးစပ်လေ့ရှိတတ်တဲ့ Taytay အကျင့်ကိုနောကြေနေတဲ့ အက်မင်ကတော့ Alwyn အတွက်မျက်ခုံးလှုပ်ချင်သလိုလိုဖြစ်မိနေပါတယ်။ ဘယ်တော့များ Taylor Swift ရဲ့ ကုန်ကြမ်းဖြစ်သွားရှာမလဲဆိုပြီးတော့လေ.. ? ယူတို့ရော ဘယ်လိုထင်သလဲ?? ဒီတစ်ယောက်နဲ့များ တကယ်မြဲတော့မှာလား ပြတ်မှာပဲလားဆိုတာကို ခန့်မှန်းကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်……
Refrence : ENEWS
PREVIOUS POST Previous post: ‘It’s Dangerous Beyond The Blankets’ ဆိုတဲ့ Variety Program တစ်ခုမှာ အတူတူမြင်တွေ့ရဉီးမယ့် IKon ရဲ့ Junhoe နဲ့ Wanna one ရဲ့ Kang Daniel
NEXT POST Next post: City Boy ဆိုတဲ့ debut single ထုတ်လိုက်တဲ့ Stranger Things မင်းသားလေး “Finn”